Sida loo hagaagsan playlist si iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo hagaagsan playlist si iPhone aan Lugood
"Midkiinna ma yaqaan hab fudud u hagaagsan playlist si iPhone? Waxaan u baahanahay si ay u gudbiyaan playlist si iPhone u dhagaysto on tagaan. Waan ogahay Lugood waa inay awoodaan inay u sameeyaan. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood, Lugood aan kaliya ka tago shaqada. Hadda waxa madax u ah i si aad u hesho playlists on my iPhone. walba oo soo jeedinaya la qadariyo doonaa. Thanks! "
Playlist ma syncing si iPhone noqon kartaa madax xanuun u isticmaala iPhone oo jecel in ay isticmaalaan iPhone sida iPod ah inay dhegeysato muusikada. Dhab ahaantii, iPhone shaqaysaa si aad u la mid ah iPod. Si kastaba ha ahaatee, marka isticmaalaysa internet, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa in dadka ka hadleynaa 'sida ay u dajiyaan playlist si iPhone ee discussions.apple.com. Mararka qaar, sababtoo ah Lugood Match ama nafteeda Lugood, playlists kaliya looma wareejin karo si ay iPhone. Dhab ahaantii, Lugood ka sokow, aad ku xirnaan karaan kale Lugood ah si hagaagsan playlist si iPhone. In socda, waan kuu sheegi doonaa sida aad u hagaagsan playlist si iPhone ka your computer iyo Lugood.
Wondershare TunesGo waa aalad desktop iPhone in aan u isticmaalno si ay u gudbiyaan playlist si iPhone. Marka aad daasho ee Lugood ama kaliya heli in Lugood ma aan samayn karo waxa aad ka filan in ay sameeyaan, waa inaad isku daydaa TunesGo. Waa ay Lugood Saaxiibkiis ugu fiican si uu u xaliyo waxa Lugood dhaco gaaban. Sidaa daraadeed, si aad u iPhone wareejin karaan playlist ka computer iyo Lugood. Fiiri sida ay u shaqayso.
Connect iPhone la Windows PC iyo abuurtaan TunesGo. Waa arki doonaa iPhone iyo muujiyaan iPhone uu furmo suuqa ugu weyn ee la dhammaan faylasha ay soocaa category. Laga bilaabo dhanka bidix, waxaad ka arki kartaa shay sida Playlists magacaabay. Waxaa Click, oo dhan playlists aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa guriga dhankiisa midigta.
Tallaabada 2. Import playlist si iPhone
Riix saddexagalka hoos Add on sare ee suuqa kala weyn. Laga soo bilaabo liiska hoos-hoos u, aad arki doonaa 2 fursadaha: Ku dar Lugood playlist iyo dar playlists ka Computer. Haddii aad ku dhufo "Add Lugood playlist ', sanduuq wada hadal cusub muuqan doono oo dhan playlists Lugood. Markaas waa in aad u hubiso ka playlists loo baahan yahay oo guji "OK '. Haddii aad ku dhufo "Add playlist ka Computer ', markaas imika u maleeyeen in aad dhirtuba your computer dooro gal ah oo badbaadiyay heesaha oo dhan aad u baahan tahay. Ka dib markaas, waxaad ka arki kartaa magaca folder wuxuu noqonayaa magaca playlist ah, iyo heesaha oo dhan ee galka waxaa lagu daraa playlist ah.
Bal eeg, siday u fududahay in dajiyaan playlists ka computer iyo Lugood in aad iPhone. Si aad u ogaatid faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan aaladaha Apple ay taageerayaan, fadlan riix halkan.
Download TunesGo maxkamad version in ay isku dayaan oo lacag la'aan ah hadda!